Mitantara ny fahazoany fanalefahan-tsazy izay nositrahany tamin'ny fitondrana mijoro sy ny antony nametrahana azy eny amin'ny fitaizana zokiolona eny amin'ny Foyer de vie Andrainarivo i Odon Michel Andriamamonjisoa .
Nanondrana omby tany ivelany
"Mpiantoka omby ny asako tamin'ny fanombohako ny fahatanorana. Niainga tamin'ny fividianana omby iray ary nivarotra izany tany amin'ny tsena hafa ka nangonina hatrany ny tombony ary nampiasaina. Tafakatra roa, telo, efatra hatrany ny omby voavidiko tamin'ny toerana be omby ary noroahina na nentina fiara tamin'ny toerana vitsy omby ka nety ny tsena. Niezaka nanaja ny asako aho izay namelomako ny vady aman-janako. Nety ny fitadiavana ka tonga mpanao dabokandro, mpitondra omby maro amin'ireo tsena teto afovoan-tany aho raha nandroaka omby avy any Bongolava sy ny faritra atsimon'ny Nosy. Taty aoriana, lasa patiraona omby tanteraka aho ka namatsy ny renivohitra. Niitatra ny tetikasa, nahita lalam-barotra ka nanondrana omby tany ivelany, tamin'ireo Nosy manodidina ato amin'ny ranomasimbe Indianina aho. Nanitatra tsena tany amin'ireo firenena afrikanina ary hatrany amin'ny kaontinanta hafa koa tamin'ny fanondranana omby.
Ara-dalàna daholo ny taratasim-panondranana sy fivarotana ary fividianana omby tamin'izany. Nipoitra anefa ny olana, noho ny fifaninanana ara-barotra sy ny fialonana ka ireo mpifanandrina tamiko no nisy nitoroka ahy ary nanomboka teo aho no sahirana tanteraka. Niaka-nidina tribonaly ny raharaha, voapanga ho mpamotsy omby halatra aho. Voapanga ho mpividy omby tsy ara-dalàna koa ka nidoboka am-ponja am-polony taona maro be. Saika lany tany am-pigadrana ny fahatanorako. Taona vitsy sisa tsy efako ny sazy ary izao efa hananika ny faha-70 taonako izao aho no namangy tany am-ponja ny Filoha Andry Nirina Rajoelina ka anisan'ireo nahazo ny famotsoran-keloka aho. Rehefa nandeha ny zotra sy ny dinika rehetra teo amin'ny fonja sy ny filoham-pirenena ary ny mpitondra fivavahana dia tapaka ny hevitra fa ety amin'ny fitaizana beantitra ety amin'ny Foyer de vie Andrainarivo aho no najanona", hoy ity raim-pianakaviana iray izay teraka manodidina ny taona 1952.